Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka Oo Muqdisho kula Shiray Mucaaridka.(Sawiro) – Awdalmedia
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka ee Afrika Tibor Nagy oo shalay booqasho gaaban ku yimid Muqdisho ayaa Siyaasiyiinta Mucaaradka iyo Ururada Bulshada Rayidka, iyadoo kulamadan ay ahaayeen kuwo is xog wareysi ah oo looga hadlayay xaalada siyaasadeed ee dalka.
Arrimaha looga wada hadlay kulankan ayaa ahaa in la helo siyaasad mideysan, sharciyad xooggan iyo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku dhaca.
Mr Tibor Nagy ayaa xubnihii uu la kulmay waxaa ka mid ahaa Xildhibaan Faarax Sheekh C/qaadir, C/qaadir Cosoble oo ka mid ah Siyaasiyiinta mucaaradka, sidoo kale waxaa uu la kulmay Cali Xaaji Warsame oo horay Wasiir iyo Musharax Madaxweyne Puntland iyo Federaalka ahaa, Wasiirkii hore Arrimaha Dibadda Soomaaliya ahna Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Fowziyo Yusuf.
Waxaa kaloo Kaaliyaha la kulmay Xubnaha Ururada Bulshada Rayidka oo uu ka dhageystay warbixino kala duwan oo ahaa dhinacyada xuquuqda aadanaha, aragtida bulshada ee ku aadan siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya.
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda ayaa horay ula kulmay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, iyagoo ka wada hadlay arrimaha dib u habeynta Ciidamada iyo nidaamka dhaqaalaha Soomaaliya.
Mareykanka ayaa muddooyinkan waday dadaalo la xiriira inay isku si ula hadasho dhammaan dhinacyada Siyaasadda Soomaalida, isla markaana albaabada u furay dhinacyada mucaaradsan dowladda, si loo helo siyaasad mideysan, loona gaaro in dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay.
Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda u qaabilsan Afrila ku yimid Muqdisho ayaa noqonaya mas’uulkii ugu heerka sareeyay ee ka socda Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka oo Soomaaliya yimaada, kaddib John Kerry Xoghayihii hore Arrimaha dibadda Mareykanka oo Muqdisho yimid shan sano ka hor.